Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Monday, September 13, 2010 Monday, September 13, 2010 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ဒီနေ့လည်း ကျွန်မတို့ဒေသမှာ စားသောက်တတ်ကြတဲ့ ဟင်းများနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်.. ဒေသအစားအစာ ဆိုပေမဲ့လို့ အခြားဒေသတွေမှာလည်း ရနိုင်ပြီး စားသောက်တတ်ကြတဲ့ ဟင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်... ချက်ပုံချက်နည်းသာလျှင် အနည်းငယ် ကွာခြားသွားနိုင်ပါတယ်.. တိုင်းရင်းသား ဟင်းချက်နည်းတွေဟာ အများအားဖြင့် ဆီအထည့်နည်းပါတယ်.. အသားငါးထက် အသီးအရွက်ကိုသာ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ဆန်းဆန်းပြားပြား ပိုပြီး လုပ်စားတတ်ကြပါတယ်.. ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း အသားငါးချက်တာထက် အသီးအရွက်ကိုသာ ပိုပြီး စားဖြစ်ပါတယ်.. အိမ်မှာလဲ အသားစုံ စားတာဆိုလို့ ကျွန်မအဖေနဲ့ မောင်လေးတွေသာ ရှိပြီး ကျန်မိသားစုဝင်တွေ အားလုံး ၀က်၊ အမဲ မစားကြတာကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံ ကြက်၊ ငါးနဲ့ အသီးအရွက်သာ အချက်များပါတယ်.. ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ရဲ့ ဒေသအစားအစာ ဆိုရာမှာ ဟင်းကြီးဟင်းကောင်းများ ချက်ပြထားတာ မဟုတ်ဘဲ သာမန် အိမ်ချက်ဟင်းများသာ ဖြစ်ကြောင်းကြိုတင် စကားခံပါရစေရှင်။
ဒီအရွက်တွေက ကျွန်မတို့ဒေသမှာ အသုံးများတဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ရွက်များ ဖြစ်ပါတယ်.. အပေါ်ဆုံးက ထိပ်ချွန်းကလေးနဲ့ ဖက်ဖယ် လို့ ခေါ်ပါတယ်.. အရွက်အရှည်ကတော့ ရှမ်းနံနံပါ။ အောက်ဆုံးက သေးသေး တွန့်တွန့်လေးများကတော့ နံနံပင်( ဗမာနံနံ) လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်..
ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်ပေးမဲ့ ဟင်းလျာက အားလူးသုပ်ပါ။
အာလူးကို ပါးပါးလှီးပြီး အချောင်းလေးတွေဖြစ်အောင် လှီးဖြတ်လိုက်ပါတယ်..
ရေနွေးဆူဆူထဲ ခုလိုပြုတ်ပါတယ်... အားလူးကို မကျိုးမကြေစေဖို့ အချိန်အနည်းငယ်သာ ပြုတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. မဟုတ်ပါက အာလူးများ ပြော့ပြဲသွားနိုင်ပါတယ်.. ဆတ်တောက်တောက်လေး ဖြစ်နေမှသာ ပိုစားကောင်းပါတယ်...
ပြုတ်ပြီးအားလူးချောင်းများကို ကြက်သွန်နီ၊ ငရုပ်သီး၊ နံနံ၊ ပုဇွန်ခြောက်၊ ပဲမှုန့်၊ ဆားအချိုမှုန်၊ ဆီချက်(သို့) ဆီစိမ်း၊ သံပုရာသီး၊ မြေပဲဆန်ထောင်းများထည့်ပြီ့း နယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ချဉ်စပ် အာလူးသုပ်တစ်ပွဲ ရပါပြီ။
ကြက်ဥကို ချက်စား၊ ကြော်စားရတာ ငြီးငွေ့သူများအတွက် တစ်မျိုးပြောင်းပြီး ထောင်းစားဖို့အတွက် ကချင်ဒေသမှာ ထောင်းလေ့ရှိတဲ့ ကြက်ဥထောင်းပါ။ ငရုပ်သီးစပ်စပ်ကြိုက်လျှင် များများ ထည့်နိုင်ပါတယ်...
ကြက်ဥကို ပြုတ်ပြီး အခွံခွာပါတယ်.. ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုပ်သီးများကို ရေစင်စင်ဆေးပြီး ငရုပ်ဆုံထဲ ထည့်ထောင်းပါတယ်..
ကြက်ဥကို ခုလို သေးသေးနှုတ်နှုတ်လေးတွေဖြစ်အောင် စင်းလိုက်ပါတယ်.. ပြီးတာနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုပ်သီးစိမ်းတို့နဲ့ ရောထောင်းလိုက်ပါတယ်..
ဆား၊ အချိုမှုန့်နဲ့အတူ နံနံပင်များကို ကြက်ဥနဲ့အတူ ရောမွှေပြီး သမအောင် ထောင်းလိုက်ပါတယ်.. ကျွန်မတို့အရပ်မှာတော့ ဖက်ဖက်ရွက်ကို သုံးကြပါတယ်.. ဖက်ဖယ်မရှိက နံနံပင်ထည့်လို့ အဆင်ပြေပါတယ်...
တစ်ဆက်တည်း ကြက်ဥလေးပါ ပေါင်းစားလိုက်ကြရအောင်နော်.. ကြက်ဥကို ဘာနဲ့မှ မရောဘဲ အလွတ်ပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်..
ကြက်ဥ ၄လုံး၅လုံးကို ပန်းကန်ထဲ ထည့်ပြီး ခပ်ကြာကြာလေး ဇွန်းနဲ့ ခလောက်ပါတယ်.. ဆားအချိုမှုန့် ၊ ဆီအနည်းငယ် ရေသောက်ရေခွက်တစ်ဝက် ထည့်ပြီး နှံ့စပ်အောင် ရောမွှေပါတယ်.. စိတ်ကြိုက် ရောသမမွှေပြီးသွားရင် အပေါ်မှ ရှောက်ကော၊ ပါးကော( တရုတ်မဆလာ) အမှုန့်များကို ပန်းကန်တစ်ပြင်လုံး နှံ့အောင် ဖြူးပါတယ်.. မီးဖိုပေါ် အိုးတစ်လုံးထဲ ရေကို ကြက်ဥပေါင်းမဲ့ ပန်းကန်တစ်ဝက် မြုပ်သာရုံ ထည့်ပြီး ကြက်ဥပန်းကန်ကိုထည့်ကာ အဖုံးအုပ်ထားလိုက်ရင် မကြာခင်မှာ မွှေးကြိုင် ပျော့ပြောင်းနေတဲ့ ကြက်ဥပေါင်းတစ်ခွက် ရပါပြီ။ ကြက်ဥပေါင်းရင် ရေများများ ရောမှ ကြက်ဥပူတင်းကဲ့သို့ ပျော့ပျော့အိအိလေးနဲ့ ပိုစားကောင်းပါတယ်..
ကြောင်လျှာသီးအစိမ်းကို ပါးပါးမျှင်မျှင်လေးတွေ လှီးပါတယ်.. ပြီးတော့ ဆားနဲ့ သေချာနယ်ပြီး အခါးရည်များထွက်သွားအောင် အရည်ညစ်ပစ်ရပါတယ်..
ပြီးတော့ ခုလို ရေစိမ်ထားလိုက်ပါတယ်နော်။
စားခါနီးမှ ရေစိမ်ထားတဲ့ကြောင်လျှာသီးကို ရေစင်အောင်ညှစ်ပြီး ဆားအချိုမှုန့်၊ ကြက်သွန်နီ ပါးပါးလှီး၊ ပုဇွန်ခြောက်၊ ငရုပ်သီးစိမ်း၊ သံပုရာသီးတို့နဲ့ ရောနယ်လိုက်ရင် ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် ကြောင်လျှာသီးသုပ် ရပါပြီ။ အပေါ်က နံနံပင်လေး ဖြူးထားလိုက်ရုံပါဘဲ...
အစောတုန်းကလိုဘဲ ကြောင်လျှာသီးကို ပါးပါးလှီး ဆားနယ်ပြီး ရေစိမ်ထားတဲ့ အဖတ်များကို ဆန်လှော်ဟင်းရည် ချက်စားကြရအောင်နော်.. ဟင်းရည်အိုးတည်ပြီး ငပိအနည်းငယ်၊ ဆား၊ ပုဇွန်ခြောက် ၊ ငပိမရှိပါက အသားမှုန့် ထည့်နိုင်ပါတယ်.. ခရမ်းသီးကို မီးဖုတ်၊ မီးဖုတ်ရအခက်အခဲရှိပါက အခွံခွာပြီး ပြုတ်လိုက်ပါတယ်... ပြီးရင် အခွံနွာပြီး တောက်တောက်စင်းကာ ဟင်းအိုးဆူလာပါက အိုးထဲ ထည့်လိုက်ပါတယ်.. ပြီးလျှင် ကြောင်လျှာသီးကိုထည့်ပြီး ဆန်ကိုညိုအောင် လှော်ကာ အမှုန့်ထောင်းထားသော ဆန်လှော်မှုန့်ကို ထည့်ပါတယ်.. အချိုမှုန့် ထည့်ပြီး အပေါ့အငံ မြည်းကာ ပင်စိမ်းရွက်လေး ခတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဆန်လှော်နံ့လေး မွှေးမွှေးနဲ့ ဟင်းရည်တစ်ခွက် ရပါပြီ။
ငါးတို့ ကြက်သားတို့ ၀က်သားတို့ကို ဆီပြန်ချက်စားရတာ ကြာတော့ အီလာတတ်ပါတယ်.. တစ်ခါတစ်လေလည်း ခုလို ချဉ်စပ်လေး အရည်လေးနဲ့ ချက်စားရင် ထမင်းမြိန်စေပါတယ်.. အရင်ပိုစ့်တွေမှာ ကြက်သားကချင်ချက်ကို ချက်ပြဖူးပါသေးတယ်.. ငါးကချင်ချက်က ခက်ခက်ခဲခဲတော့ မဟုတ်ပါဘူး... ကချင်ချက်က ဆီသတ်ပြီး ချက်ဖို့ မလိုပါ။ အားလုံးရောပြီး ချက်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်..
ကြေးခွံပါတဲ့ ငါးကို အရွယ်တော်ကို ခုတ်ပိုင်းပြီး ချက်မဲ့အိုးထဲ ထည့်လိုက်ပါတယ်.. ဆား၊အချိုမှုန့်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုပ်သီးစိမ်း၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ နံနံပင်၊ဖက်ဖယ်၊ ရှမ်းနံနံ စသည်တို့ကိုလည်း အိုးထဲတစ်ခါတည်း ထည့်ပါတယ်.. အရောင်တင်၊ နနွင်းမှုန့် အနည်းငယ်၊ ဆီ အနည်းငယ် ထည့်ပါတယ်... ကချင်ချက်မှာ ဆီကို ပါတယ်ဆိုရုံလေးသာ ထည့်ပါတယ်.. ဆီများလျှင် စားမကောင်းပါ။ အချဉ်အဖြစ် မက်လင်ချဉ်သီးအခြောက် (သို့မဟုတ်) ချဉ်စော်ခါးကားသီး အခြောက်များကို ပါးပါးလှီးထည့်ပါတယ်.. ၄င်းအသီးများ မရနိုင်ပါက သံပုရာသီး ညှစ်ထည့်ပြီး ချဉ်အောင် လုပ်၍ ရနိုင်ပါတယ်... နောက် ရေ အလောတော် ထည့်ကာ ဆူပွက်လာအောင် ချက်ပြီး အပေါ့အငံမြည်းလို့ အသားကျက်ပြီဆိုရင် ရေမခန်းခင် ချကာ နံနံပင်လေး အပေါ်က ပြန်အုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အရည်လည်းသောက်လို့ရတဲ့ ချဉ်စပ်အရသာနဲ့ မွှေးကြိုင်တဲ့ ကျွန်မတို့ဒေသရဲ့ နံမည်ကျော် ငါးကချင်ချက် ရပါပြီ။
ရန်ကုန်မှာတော့ ဆလပ်ရိုးလို့ သိကြတဲ့ အော်ဆွန်းကို သုပ်ပါဦးမယ်ရှင်။
ဒါလေးက ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ ကျွန်မတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာ ပေါပေါများများ တွေ့ရတဲ့ အော်ဆွန်းပါ။
အပေါ်က အခွံကို နွာပြီး ပါးပါးရှည်ရှည် သေးသေးအချောင်းလေးများ ဖြစ်အောင်လှီးပြီး ရေအေးထဲမှာ ခနလောက် စိမ်ထားလိုက်ပါတယ်.. ရေစိမ်ထားပြီး စားခါနီးမှ သုပ်စားရင် ကျွတ်ဆတ်ဆတ်နဲ့ စားရတာ အရသာ ပိုကောင်းပါတယ်.. ကြက်သွန်နီ၊ ငရုပ်သီးစိမ်း၊ ပုဇွန်ခြောက်၊ဆားအချိုမှုန့်၊ မြေပဲဆန်များ ထောင်းထည့်လိုက်ကာ သံပုရာသီးညှစ်ပြီး နံနံပင်နဲ့ နယ်လိုက်ရင် အော်ဆွန်းသုပ်တစ်ခွက် ရပါပြီ။ အော်ဆွန်းကို ရှမ်းထမင်းဆိုင်တွေမှာလို ကြာဆန်နဲ့လည်း သုပ်စားနိုင်ပါသေးတယ်..
ခရမ်းချဉ်သီးကို မီးကင် (သို့) ရေနဲ့ ပြုတ်ပါတယ်.. ခရမ်းချဉ်သီးများ ပျော့လာပါက အခွံခွာပြီး ခရမ်းချဉ်သီးကို တောက်တောက်စင်းကာ ပန်းကန်လုံးတစ်ခုထဲထည့်ပြီး ကြက်သွန်နီ၊ ဆား၊ ငပိအနည်းငယ် (မထည့်လျှင်လည်း ရပါတယ်) အချိုမှုန့်၊ အသားမှုန့်၊ ငရုပ်သီးစိမ်း၊ နံနံပင်တို့ဖြင့် ရောမွှေလိုက်ပါက စားကောင်းတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး ပန်ထွေဖျော် တစ်ခွက်ရပါပြီ။
အရွက်စုံ အတို့အမြုတ်လေးနဲ့ ပန်ထွေဖျော်ကို တွဲဖက်လို့ စားနိုင်ပါပြီ။
ငါးပေါက်စန သေးသေးလေးများကို အိုးကပ်ချက်စားဖို့ ရေစင်အောင်ဆေး ချေးဖောက်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ၊နီ၊ ငရုပ်သီးစိမ်း၊ အားအချိုမှုန့်၊ မျှစ်တို့ခြောက် (ချဉ်သောအရသာရှိစေရန်) မျှစ်တို့ခြောက်အစား ခရမ်းချဉ်သီးများများ ထည့်နိုင်ပါသည်။ နံနံ၊ ဖက်ဖယ်ရွက်၊ ဆီ၊ အရောင်တင်၊ နနွင်းမှုန့်များဖြင့် အိုးထဲ ရောနယ်လိုက်ပါတယ်...
ရေထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ် တည်လိုက်ကာ ရေခမ်းချိန်မှာ ဆားအပေါ့အငံမြည်းလို့ ချလိုက်မယ်ဆိုရင် ငါးကလေး အိုးကပ်ဟင်းကို ရပါပြီ။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, September 11, 2010 Saturday, September 11, 2010 Labels: သုတအဖြာဖြာ
နည်းပညာ အသစ်အဆန်းတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဒီဂျစ်တယ် ပစ္စည်းအချို့နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါဦးမယ်....... ဟဲဟဲ ကြိုက်တာတွေ့ရင် ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ရှာဝယ်ကြပါနော်..
အောက်ကပုံတွေဟာ ဂျပန် နည်းပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပြီး Motion Sensor System တတ်ဆင်ထားတဲ့ ဖဲန်စီကွန်ပျူတာ မောက်စ်တွေပါ။
လှတော့လှပါရဲ့ .. သုံးလို့ အဆင်ပြေမပြေတော့ ကိုယ်တိုင်မသုံးဖူးသေးလို့ မသိသေးပါ။။ လက်ဆောင်ရရင်တော့ သုံးကြည့်ဖို့ စိတ်ကူးရှိပါတယ်.. :)
ပိုက်ဆံအိတ်သာသာအရွယ် Wireless Keyboard ပါ.. ပါးပါးလှပ်လှပ်လေးနဲ့မို့ သယ်ယူဖို့လဲ လွယ်ကူပါတယ်.. ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသားများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် Projects များ Presentation လုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ခရီးသွားလာရာတွင် လည်းကောင်း အသုံးပြုဖို့ သင့်တော်လှပါတယ်.. ခလုပ် ၈၃ခုပါဝင်ပြီး ကွန်ပျူတာမှ ၁၅မီတာ အကွာအဝေးအထိ ကြိုးမဲ့ အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်..
ရောင်းဈေးက ၃၉ ဒေါ်လာပါ။
Connect button to connect Bluetooth in your PC
On / Off button at the back
Max. distance: 15m
Powered by 2pcs AAA batteries (Not included)
USB Flash Drive in Jewelry Necklaces
ရတနာစီခြယ်ထားတဲ့ ပိုးကောင်းပုံ USB Drive ပါ။ ဒေတာတွေကို သိုလှောင် သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ ပမာဏက 8GB ရှိပါတယ်... မိမိတို့ရဲ့ အရေးကြီး အချက်အလက်များကို ကိုယ်နဲ့မကွာ သိမ်းဆည်း ထားနိုင်သလို အလှဆင် ဆွဲကြိုးအဖြစ်ပါ အသုံးဝင်ပါတယ်.. ရောင်းဈေး ၃၃ ဒေါ်လာပါတဲ့။
Portable and easy operation
Stylish and useful
Support Windows XP/Vista, Linux 2.4, MAC OSX or lastest version
Dimension: 53 x 28 x 18mm (approx.)
ရတနာစီခြယ်ထားတဲ့ ပျားပုံ USB Drive ပါ
Jewel bee design
USB အဖြစ် အသုံးမလိုတဲ့ အချိန်ကျရင် လှပချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဆွဲကြိုးလေးတစ်ခု အဖြစ် သုံးနိုင်ပါတယ်.. ရောင်းဈေး ဒေါ်လာ ၂၅.၅၀ ပါ။
အလွန်သေးငယ်တဲ့ ခရစ်ဒစ်ကဒ်အရွယ် Video Player ပါ။
ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ Screen ပါရှိပြီး ဘက်ထရီက ၈နာရီကြာ ခံတယ်လို့ သိရပါတယ်..
Mini Media Players Handle Video, Audio and can do Voice Recording
Keys on Neon M3 are heat sensitive and glow when touched
Integrated Speaker, or use the included Headphones
Built in Storage:2GB
Support USB mass-storage mode for easy transfer of videos on any OS
Expandable Memory Slot - ICE (TransFlash/MicroSD), Neon M3 (T-Flash)
Video: AVI, MPEG
Voice Record: WAV
Image Viewer: JPEG
Video Playing Time: 3-4 hours
Audio Playing Time: 6-8 hours
Charges Via USB
FM Radio, Text Viewer, Picture Viewer, Game
Built-in External Speaker
3.5mm Stereo Earphone Output
USB Flash Drive and Voice Recorder
USB Data Storage အနေနဲ့သာ မက Recording ပါလုပ်လို့ရတဲ့ ပစ္စည်းလေးပါ.. တစ်ဆက်တည်း ၅နာရီကြာအောင် အသံသွင်းလို့ ရတယ်လို့ သိရပါတယ်.. သင်တန်းတွေ၊ ဟောပြောပွဲတွေအတွက် အသုံးဝင်မဲ့ ပစ္စည်းလေးပါ။ သယ်ရလွယ်ကူပြီး လူမမြင်အောင် အသံခိုးသွင်းဖို့အတွက်လည်း အဆင်ပြေလှပါတယ်..
Built-in voice recording On/Off switch
File Format: WAV - 1GB ~ 70hours recording
Battery powered (around5hours per full charge)
Support Window7/ Vista / XP, Linux 2.4, Mac OS X or latest version
Dimension: 64 x 21 x 9mm (approx.)
ဒီဇိုင်းဇုံ USB Drive များ
စကိတ်ပုံ USB Drive
Santa Cruz Screaming Hand SkateDrive
ပုလင်းအဖုံး ဖွင့်နိုင်တဲ့ USB Drive
TrekStor USB-Stick with Bottle Opener
Price: $33.58 USD
ငွေအကြွေစေ့လေးများသဏ္ဍန် USB Drive
LaCie CurrenKey USB Flash Drive
Price: $42.40 USD
Gundam USB Flash Drive
Price: $ 57.75 USD
Ravage Transformer USB Flash Drive
Price: $42.99 USD
Memory Pill USB Drive
Memory : 64MB
Price: $17.86 USD
MP3 Sunglasses 4GB
ဒီပစ္စည်းလေးကတော့ တရုတ်ပြည်လုပ် မျက်မှန်တပ်ရင်း သီချင်းလဲ နားထောင်လို့ရတဲ့ MP3 မျက်မှန်ပါ။ ပေါ်နေတာတော့ ကြာပါပြီ။ အနက်ရောင်၊ နီညိုရောင်၊ငွေမှင်ရောင် သုံးမျိုး တွေ့ရပြီး Quality ကောင်းတဲ့ မှန်သားကြောင့် နေရာင်ဒဏ်ကိုလည်း ကောင်းမွန်စွာ အကာအကွယ်ပေးသလို သီချင်းသံများကိုလည်း ပီပြင်ကြည်လင်စွာ နားဆင်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်.. သီချင်းများကို 4GB အထိ ထည့်သွင်း သိမ်းဆည်းထားနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်..
ရှိုးလဲထုတ်ရင်း သီချင်းလဲ နားထောင်ရင်းပေါ့။
Music Format: MP3, WMA, WAV Bit rate: 32-320Kbps
SNR (Signal to Noise Ratio): 88dB
Output of earphones: 2x5mw (16Ohm)
System: Windows 98/2000/XP
Power Source: Built In Rechargeable Li-ion Battery Other Features:
LED Indications Accessories:
Mini CD with Driver
Digital Pocket Video Recorder
အောက်က ပစ္စည်းလေးကတော့ အိတ်ဆောင် ဗီဒီယို ကင်မရာလေးပါ... ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် ဘောပင်လေး တစ်ချောင်းလိုပါဘဲ... ဘယ်သူမှ မသိအောင် ဗီဒီယို အလွယ်တကူ ရိုက်နိုင်တာမို့ စပိုင်ကင်မရာ (Spy Camera ) လို့တောင် ခေါ်ဆိုကြပါတယ်.. ဗီဒီယိုနဲ့အတူ အသံပါ recording လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်.. လျှို့ဝှက်အေးဂျင့်များအတွက် အလွန်အသုံးဝင်မဲ့ ပစ္စည်း ဖြစ်ပါတယ်.. ဒေတာများကို 8GB အထိ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်..
ဘောပင်နဲ့ ဘာမှ မထူးပါဘူးနော်
ကင်မရာက မှန်ဘီလူးက ဒီနေရာမှာ ရှိပါတယ်..
ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ဒေတာတွေ ပြောင်းထည့်လိုက်ရုံပါဘဲ။
Primary Function: Video recording "Spy Pen" and USB drive with 8 GB's of
- Internal Flash Memory: 8GB
- Frame Rate: 10 FPS
- Capture Resolution: 640x480
Power Source: Internal Battery
Battery Life: Approx 100 minutes
Dimension: 150mm (L) x 16mm (Diameter)
ကောင်မလေးတွေရှေ့မှာ ဒီလိုနည်းနဲ့ ဗီဒီယို ရိုက်လို့ ရတယ်.. ဒီပစ္စည်းလေးကတော့ မိန်းခလေးတွေ သတိထားနိုင်ဖို့ပါ။ ဘောပင်လေး အင်္ကျီမှာ ဒီလိုချိတ်ထားပြီး မဟုတ်တရုတ် စကားတွေ လာပြောနေရင် ၂ခါ မစဉ်းစားနဲ့ ... ပါးသာ ပိတ်တီးလိုက်ပါတော့... အဲ ဟုတ်ပေါင်.. ဘောပင်ကို သေချာဆွဲဖြုတ်ပြီး စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါလို့။ :) :)
Source from Crazytechnology.com